Arsenal oo diyaar u ah inay January soo qaadato Sanches iyadoo saddex xiddig dartiis u iibineysa – Gool FM
Arsenal oo diyaar u ah inay January soo qaadato Sanches iyadoo saddex xiddig dartiis u iibineysa
Ahmed Nur November 25, 2021
(London) 25 Nof 2021. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa lasoo warinayaa inay suuqa January sameyneyso saxiixyo muhiim ah iyadoo bartilmaameedka koowaad ka dhigatay xiddiga khadka dhexe uga ciyaara naadiga Lille ee Renato Sanches.
24-sano jirka reer Portugal ayaa dhowaan albaabada u furay ka hayaamidda kooxdiisa bisha January ee sanadka soo aaddan isagoo sheegay inay Gunners ka mid tahay kooxaha laga yaabo inuu ku biiro.
Sida laga soo xigtay wargeyska Calciomercato, Arsenal ayaa raadineysa qarash ay kula soo saxiixato Sanches isla markaasna ay iibkiisa ku garaacdo AC Milan, waxayna kooxda Macallin Mikel Arteta iibineysaa Alexandre Lacazette, Eddie Nketiah iyo Bernd Leno.
Si kastaba ha ahaatee, xiddigii hore ee Bayern Munich ayaa xilli ciyaareedkan la tacaalaya dhaawacyo kala duwan isagoo kaliya sagaal kulan u saftay kooxda Faransiiska ka dhisan xilli ay xusid mudan tahay inuusan mustaqbalkiisa laheyn sal fadhiya.
Ma dhab baa inuu Thiago Silva ku dhow yahay inuu heshiis cusub la galo kooxdiisa Chelsea?
Qiimaha ay Chelsea ku iibineyso Christian Pulisic oo la ogaaday xilli laacibkan lala xiriirinayo Barca iyo...